Ngwongwo ọgwụ nke tamarind - AFRIKHEPRI
Osisi na-ekerịta nri n'etiti ha site na mgbọrọgwụ
Le tamarind na-eme ka akụkụ eriri afọ na-emegharị ma na-eme ka mgbaze ahụ dịwanye mma. Carminative na mgbochi ọrịa, ọ na-etinye aka na nsogbu nke eriri afọ dịka bloating, flatulence na afọ ọsịsa. Antiseptik, tamarind na-eme ka nsogbu urinary daa (karị cystitis). Maka nsogbu iku ume, a na-eji ya dịka onye na-ele anya bụrụ ihe na-arịa ụkwara ume ọkụ. N'ihi antioxidants ya, a na-atụ aro ya na mgbochi nke ịka nká.
A na-atụ aro tamarind ọgwụgwọ, ọgwụgwọ na antifungal, na-agwọ ọrịa dị iche iche akpụkpọ anụ: ọnyá, ọrịa, supermfected dermatoses. Na stomatology, ọ na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịrịa ụra ma ọ bụ gingivitis na ọ bara uru n'oge nrịanya nke ụmụ ọhụrụ. Iji mee ihe iji na-emeso akpịrị akpịrị.
Mgbochi nta, ọrịa iku ume iku ume, akpịrị akpịrị, mgbu ọnụ, ọrịa anụ ahụ (dermatitis, ọnyá), conjunctivitis, mgbu nke membranes mucous, fever, diarrhea and biliary colic.
Ndị ọzọ na-egosi ọgwụgwọ gosipụtara
A na-atụ aro mmiri ọṅụṅụ Tamarind iji belata ọgbụgbọ na agbọpụ nke ụmụ nwanyị dị ime. A makwaara osisi a maka uru ya na ọbara mgbali elu na asthenia.
O kwere omume ime ndokwa maka ime ụlọ:
- Maka ihe na-esi na ya ma ọ bụ herbal tia, gụọ 20 g nke pulp n'otu lita mmiri.
- Decoction maka mpụga eji: esi nri ogwu (+/- 15 cm) na 1 l mmiri ruo iri atọ. Mee ka macerate dịkarịa ala awa abụọ. Jiri ma ọnụ ma ọ bụ na akpụkpọ anụ, dị ka mgbochi-infective ma ọ bụ astringent. N'ime ime ụlọ, a ga-eji decoction a mee ihe megide afọ ọsịsa na ọnụego 2 kwa ụbọchị.
Nlekọta maka iji tamarind
Enweghị nlezianya pụrụ iche iji mee ihe, ma e wezụga ịkwanyere usoro ọgwụgwọ ndị e gosipụtara. Otú ọ dị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ na ọgwụ ma ọ bụrụ na ịṅụ ọgwụ. Cheta, ọbụna na-atọ ụtọ, tamarind ka bụ ihe na-adịghị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ịba ụba nke tamarind nwere ike ime ka eriri afọ gị chebaa mkpụrụ a.
Enweghị nkwenye. N'aka nke ọzọ, maka ụmụ nwanyị dị ime (ma ọ bụ nke na-enye ara ara) na ụmụntakịrị, jụọ dọkịta gị maka ndụmọdụ. Naanị jide n'aka na ị ga-asọpụrụ ndị a tụrụ aro.
Mmetụta dị na ya
Ọdịdị dị elu ma ọ bụ nzụlite ọganihu nwere ike iduga nsogbu nsogbu.
A na-eji osisi decoction ma ọ bụ tamarind ihe ọṅụṅụ na-emeso hypotension na jaundice.
Ogologo decoction nke ogbugbo a na-ere ya iji gwọọ ọrịa shuga ọzọ na ndị bean pods na ahụekere. Nke a decoction nke ogbugbo ahụ na-egbubiga mmanya ókè iji belata stomachaches, jaundice na afọ ọsịsa.
Mkpụrụ ahụ na-ere ma jiri ya mee ihe a maara nke ọma maka mmetụta ya.
Ọgwụgwọ na usoro onunu ogwu
A na-akwado decoction nke 10 grams nke ogbugbo kwa liter mmiri na-elekọta nke ọnyá afọ. N'okwu a, ṅụọ iko abụọ n'etiti nri na otu tupu ị lakpuo ụra.
A na-eji decoration nke 40 grams nke akwukwo kwa liter nke mmiri (kachasị) iji mesoo nsogbu imeju na jaundice na ndị okenye.
Ọ bụ antibacterial na antioxidant.
A na-eji pulp mee ihe maka ịgwọ ọrịa afọ ntachi, ọrịa urinary tract na rheumatism. Ọ ga-eri 2 grams kwa afọ site na afọ 3 ọ bụghị karịa 50 grams.
Nri nke pulp enweghị nsí. Otú ọ dị, akwụkwọ ndị a tụrụ aro na akwụkwọ ogbugbo ekwesịghị ịfe.
Mkpụrụ ahụ na-ere ma jiri ya mee ihe a maara nke ọma maka mmetụta ya
Esi eme ka ahụ gị dị ọcha